Mwedzi wakasununguka weApple Music "zvakare" | Ndinobva mac
Mavhiki mashoma apfuura vamwe vashandisi ve Teregiramu chiteshi che #TodoApple Vakataura pamusoro pekupihwa kwemwedzi wepachena weApple Music kunyangwe kune avo vakatoishandisa kare, hazvo, nguva yadarika ini ndangotanga mwedzi uno wemahara weApple Music uye ndinogona kutaura kuti ndakanga ndisisina kukwidziridzwa kubva ini ndakamboshandisa miedzo yese yemahara iyo Apple yakapa.
Mune ino kesi, ini handikwanise kutaura kuti mwedzi uno mahara kune wese munhu, chandingati ndechekuti ini pachangu handina kufunga kuti ndichave nesarudzo ino shanda kusvikira ndawana sarudzo Sarudzo dzeSystem> Kugovana Kwemhuri. Muchikamu chino kunoonekwa chiziviso chekumisikidzwa kwemwedzi wakasununguka weApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi uye kana iwe ukabaya pairi, inobvunza yako ID yeApple, iwe unopinda uye iwe zvino unogona kunakidzwa nemwedzi uno wakasununguka webasa.
Ini pachangu, ndinofanira kuyambira kuti ini handisi mushandisi werudzi urwu rwebasa, kunyangwe Ini ndakadzima iyo yakabhadharwa Spotify account kuchinjira kune yemahara mwedzi mishoma yapfuura. Zvino nemwedzi uno wemahara ndinogona kukochekerwa zvakare kune urwu rudzi rwebasa uye kana iri Apple ipapo inenge iri nani, zvisinei nemhando yekunyorera yevashandisi veApple zvingave zvakati nakei kushandisa sevhisi yavo kupfuura vamwe asi Izvi ndezvekunakirwa uye ruzivo rwekushandisa, saka usazeze kuedza zvakawanda sezvaunogona uye chengeta iyo yaunoda zvakanyanya.
Izvozvi i Ini ndicha shandisa mwedzi uno mahara kubva kuApple Music pane yangu Mac, iPhone uye iPad, tichaona kana nguva yacho yapera kuti ndinogara here kana kuti kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Mwedzi mumwe wakasununguka weApple Music "zvakare"
Maitiro ekuchinjisa mabhukumaki kubva kuFirefox kuenda kuSafari